Uvimba-mali: I-Burundanga yeMilly Warning-Facts
Imiba Ulwaphulo-mthetho nohlwayo
Izilumkiso ezinobulunga zixwayisa ngabaphulaphuli basebenzisa amakhadi ezoshishino okanye amaqabunga ephepha ahlonywe kwisicatshulwa esinamandla esitrato esibizwa ngokuba yi-burundanga (eyaziwa nangokuthi i-scopolamine) ukunyanzelisa amaxhoba ngaphambi kokuwahlasela.
Inkcazo: I-rumor ye-intanethi
Ukusasaza ukususela ngo: Meyi 2008
Isimo: idibeneyo (iinkcukacha ngezantsi)
Umzekelo # 1:
Imeyili enegalelo ngumfundi, ngoMeyi 12, 2008:
Isexwayiso ... Qaphela!
Esi siganeko siqinisekisiwe. Ladies nceda uqaphele kwaye wabelane ngawo wonke umntu owaziyo!
Oku kuya kwenzeka naphi na!
NgoLwesithathu odlulileyo, ummelwane kaJaime Rodriguez wayesiteshini segesi eKaty. Indoda yafika yanikela ummelwane wayo inkonzo njengomdwebi kwaye yamnika ikhadi. Wayithatha ikhadi kwaye wangena emotweni yakhe.
Le ndoda yangena emotweni eqhutyelwa omnye umntu. Washiya isitishi waza waqaphela ukuba amadoda ayehamba esiteshini segesi ngexesha elinye. Ngokukhawuleza, waqala ukuziva ehlaziyiweyo kwaye wayengenakuyibamba.
Wazama ukuvula iifestile kwaye ngaloo mzuzu waqonda ukuba kwakukho iphunga elinamandla ukusuka ekhadini. Wayeqonda ukuba amadoda ayemlandela. Ummelwane waya kwelinye indlu yommelwane waza wancoma uphondo lwakhe ukuba acele uncedo. Amadoda ashiya, kodwa ixhoba laziva libi emininzi imizuzu.
Kubonakala ukuba kukho inkokhelo ekhadini, into leyo yayinamandla kwaye yayingalimma kakhulu.
UJaime ukhangele i-intanethi kwaye kukho iziza ezibizwa ngokuba yi "Burundanga" esetyenziswe ngabantu abathile ukuba bahlukumeze ixhoba ukuze babambe okanye baxhase. Nceda uqaphele kwaye ungamkeli nantoni na kubantu abangaziwa esitrato.
Umzekelo # 2:
I-imeyile enegalelo ngumfundi, ngoDisemba 1, 2008:
Isihloko: Isilumkiso kwiSebe lePolisa laseMetroville Metro
Indoda yafika yanikela iinkonzo zakhe njengomdwebi kwintombi ebeka igesi emotweni yakhe yashiya ikhadi layo. Uthi hayi, kodwa wamkela ikhadi lakhe ngobubele waza wangena emotweni. Lo mntu wangena emotweni eqhutyelwa enye indoda.
Njengoko le nkosikazi ishiya isikhululo senkonzo, yabona amadoda emlandela emva kwesi sikhululo ngelo xesha.
Ngokukhawuleza, waqala ukuziva ehlaziyiweyo kwaye wayengenakuyibamba. Wazama ukuvula iwindi kwaye waqonda ukuba iphunga lalo lisesandleni sakhe; Isandla esifanayo esamkele ikhadi elivela kwintsimi kwisikhululo segesi. Emva koko waqaphela loo madoda eshesha emva kwakhe kwaye wayeziva ukuba kufuneka enze into ngaloo mzuzu.
Wahamba waya kwinqanaba lokuqala waza waqala ukugubha uphondo lwakhe ngokuphindaphindiweyo ukucela uncedo. Amadoda ahamba ngaphandle kodwa le ntokazi yayisichukumisa imizuzu emininzi emva kokuba ikwazi ukumbamba.
Kubonakala ukuba kwakukho into ebonakalayo ekhadini elingazilimala kakhulu. Isiza kuthiwa 'i-BURUNDANGA' kwaye isetyenziswe ngabantu abanqwenela ukunyanzelisa ixhoba ukuze babambe okanye bawasebenzise.
Eli liyeza linezihlandlo ezine eliyingozi kunelo dlwengulo lomhla kwaye ludluliselwa kumakhadi alula.
Ngoko qaphela kwaye ungaqiniseki ukuba awuwamkeli amakhadi nganoma naliphi na ixesha kunye nedwa okanye umntu osendleleni. Oku kusebenza kulabo abenza iifowuni zendlu kwaye bakususa ikhadi xa banikela iinkonzo zabo.
FUNA UKUTHETHA LWE-E-MAIL UKUBA KUPHELA KUNYE KUNYE OYAZIYO !!!
Sgt. UGregory L. Joyner
KwiNkcazo yezeMicimbi yangaphakathi
ISebe laseLouisville Metro Correction
Ngaba kukho isiza esibizwa ngokuba yi-burundanga esetyenzisiwe ngabaphuli-mthetho baseLatin America ukuba bahlukumeze amaxhoba abo?
Ngaba iindaba kunye nemithombo yokunyanzeliswa komthetho yaqinisekisa ukuba i-burundanga isetyenziselwa rhoqo ukwenza ubugebengu e-US, eCanada nakwamanye amazwe ngaphandle kweLatin America?
Ibali elikhutshwe ngasentla, lijikeleza ngeendlela ezahlukeneyo ukususela ngo-2008, ngokuqinisekileyo luyilo. Iinkcukacha ezimbini, ngokukodwa, zithengela ngale ndlela:
Ixhoba lathi lafumana idosi yesilwanyana ngokuchukumisa ikhadi lomashishini. Yonke imithombo iyavuma ukuba i-burundanga (aka scopolamine hydrobromide) imele ifakwe, ifakwe okanye ifakwe, okanye umxholo kufuneka ube nexesha elide lokudibanisa nayo (umz., Nge-patch transdermal), ukwenzela ukuba ibe nempembelelo.
Ixhoba lisithi libone "iphunga eliqinileyo" elivela kwikhadi elichithwe ngamachiza. Yonke imithombo iyavuma ukuba i-burundanga ayinasiphelo kwaye ayinambitha.
Uhlaziyo: Matshi 26, 2010, isiganeko e-Houston, eTexas
Ngo-Matshi 2010, uMary Anne Capo ohlala eHouston wabika kwipolisa ukuba indoda yafika kuye kwisikhululo segesi yendawo kwaye yamnika iphetshana lecawa, emva koko umqala wakhe nomlotho wakhe waqala ukukhupha "njengomntu ondiqhayisa." Ngendlebe nodliwano-ndlebe ne-KIAH-TV News, uCapo uthe ukholelwa ukuba kukho "into ephakathi kwiphephancwadi" eyamenza wagula waza wafanisa oko kwenzeka kuye kwisiganeko esicacisiwe esichazwe ngasentla.
Ngaba ngaba bekube kuhlaselwa kwe-burundanga? Kubonakala kungathandabuzekiyo, kunikezelwa ukuba iimpawu zeCapo ezibikiwe (ukuvuvukala kolwimi nomqala, ukuziva ukuxhatshazwa) akuhambelani nezo zidla ngokubhekiselele kwi-burundanga (ukusila, isisulu, isisu, ukuhamba ngokukhanya).
Kwakhona, njengoko kuxoxwa ngasentla, akunakwenzeka ukuba nabani na onokufumana i-dose enamandla ngokwaneleyo ngokudibanisa ngokufutshane kunye nephepha elithile ukuba abe nemiphumo emibi.
Ngaba le ncwadana ingaba nelinye uhlobo lweziyobisi okanye imichiza? Mhlawumbi, nangona iCapo ithi ayizange ibone okanye ihobise nantoni na engavamile xa iphatha. Mhlawumbi asinakukwazi ngokucacileyo oko kwenzeke kuMary Anne Capo ngaloo mini kuba akazange aphumelele uviwo lwezokwelapha kwaye uthi ngokukhawuleza waphonsa ubungqina obunzima-i-pamphlet - kwiinkunkuma ezinokufutshane.
I-Burundanga yinguqu yesitalato yesichengululo seziyobisi ye-pharmaceutical scopolamine hydrobromide. Yenziwe kwiizitshixo zezityalo kwintsapho yase-nightshade njenge-henbane kunye ne-jimson ukhula. Liyinto edibeneyo, ithetha ukuba inokubangela iimpawu ze-delirium ezifana nokuphazanyiswa, ukulahlekelwa kweememori, ukukhulelwa, kunye nokunyuka.
Uyabona ukuba kutheni kuya kuthiwa yithandwa ngabantu abaphuli-mthetho.
Iifomullamine ifomda idibeneyo iyakuthatyathwa ngokulula kwisidlo okanye isiselo, okanye iphoswe ngqo kubuso bentwaba, iphoqele ukuba ifake.
Isilwanyana siphumelele iziphumo zayo "zombifying" ngeempembelelo zokusasazwa kweentsholongwane zentsholongwane ebuchosheni nasezintanjeni. Inokusetyenziswa kwamachiza amaninzi okusemthethweni, kuquka ukunyangwa kwesantya, ukugula kwesibhambathiso, kunye neengqumbo zesisu. Ngokomlando, sele isetyenziswe njenge "nyaniso ye-serum" ngamagunya okunyanzeliswa komthetho. Kwaye, njengokuba umzala wakhe wesitrato, u-scopolamine uye wacaciswa ngokuba yi-agent ebonakalayo okanye "isigxina sokukhwabanisa" ekuthunjweni kobugebengu obufana nokuphanga, ukuthumba kunye nokudlwengulwa komhla.
E-South America burundanga idibeneyo kwiindawo ezidumiweyo kunye nezicwangciso ezisetyenziselwa ukunyusa isimo sengqondo esinjengomthunzi kwimizila ye-shamanic. Iingxelo zetywala yokusetyenziswa kwimisebenzi yezobugebengu kuqala evelele eColombia ngexesha lama-1980. Ngokutsho kwe- Wall Street Journal ephaswe ngo-1995, inani leengxelo zonyango ezixhaswe ngolu hlobo kwilizwe liye lithetha "ubhubhane" malunga nama-1990.
"Kwimeko enye, umntu uya kunikwa i-soda okanye isiselo esityathwe ngexabiso," inqaku lathi. "Olandelayo umntu ukhumbula ukuvuka kweekhilomitha ezili-12, u-groggy kakhulu kwaye akakho nkumbulo wento eyenzekayo. Ngokukhawuleza abantu bafumanisa ukuba baye banikela ubuncwane, imali, izitshixo zeemoto, kwaye ngamanye amaxesha baye benza iirejista ezininzi zebhanki ngenzuzo yabo bahlaseli. "
Nangona ukuphindaphindiweyo kokuhlaselwa okunjalo kuye kwancipha kunye nenqanaba lolwaphulo-mthetho kulo lonke lizwe kwiminyaka yamuva nje, iSebe lase-United States lisalumkisa abahambi ukuba baqaphele "izigwenxa zaseColombia ngokukhubaza iziyobisi ukwenzela ukuba abavakhenkethi nabanye bangasebenzi."
Iingxelo eziqinisekisiweyo zokuhlaselwa kwe-burundanga zibonakala zingekho phantsi kweColombia, kodwa oko akuthethi ukuba amanye amazwe aseCentral naseMzantsi Melika aphethwe ngamahemuhemu okudlwengulwa kunye nokuphanga okwenziwa zizigwenxa ezixhaphaza kakhulu "i-zombie drug" okanye "voodoo powder" . " Abanye banokuthi banyaniseke, nangona ininzi yeembali ezijikeleza kwi-intanethi ye-intanethi yedolophu.
I-imeyile yolimi lweSpeyin ejikeleza ngo-2004 idibanise iinkcukacha zesiganeko esifana nesele sichazwe phezulu kweli nqaku, ngaphandle kokuba kwenzeke ePeru. Ixhoba lathi liye lafika kwindoda enomlenze owodwa owamcela ukuba amncede atshayele umnxeba kwifowuni yomntu. Xa wamnika inombolo yefowuni ebhaliweyo kwisikhwama sephepha, ngoko nangoko waqala ukuziva ehlaziyiweyo kwaye ephazamisekile, kwaye wafa. Ngenhlanhla, wayenokuba nengqondo yokugijima emotweni yakhe aze aphunyuke. Ngokwe-imeyile, ukuhlolwa kwegazi okwenziwe kamva kwisibhedlele kuqinisekisile ukusola kwexhoba: wayeye watyalela umthamo we-burundanga.
Kukho isizathu esingaphezu kwesinye sokungabaza ibali. Okokuqala, akunakwenzeka ukuba umntu angathabatha okwaneleyo kwilisi ngokuphatha nje isiqwenga samaphepha ukuba ahlupheke nayiphi na imiphumo emibi.
Okwesibini, isicatshulwa siyaqhubeka sithi kubhaliwe ukuba umbhali wayexelelwe ukuba kukho ezinye iziganeko zangasese zengxoworha apho amaxhoba atholakala efile, kwaye-nanko-nanko ezinye zezitho zazo zalahleka I-classic " ukweba kweentso " umgca weedolophu ).
Njengamabali ajikeleza eMntla Melika malunga nezigwenxa zisebenzisa iisampuli eziqingqiweyo ze-ether zokubakhupha amaxhoba abo, i-imeyili ye-burundanga ithengisa uloyiko, kungekhona inyaniso. Batsho malunga neentlobano ezisondeleyo zokuba ngabahlaseli, kungekhona ubugebengu bokwenene. Ziyinto engacwangcisiyo.
Musa ukwenza iphutha, imfucuza iyinyani. Isetyenziswe kwinkqubo yolwaphulo-mthetho. Ukuba uhamba kwindawo apho ukusetyenziswa kwayo kuqinisekisiweyo, sebenzisa ngokuqikelela. Kodwa musa ukuthembela ekuthumelelweni ii-imeyile ngeenkcukacha zakho.
Imithombo kunye nokufunda okuqhubekayo:
I-Latin America: Amaxhoba okulwa nokuxuba
I-Telegraph , ngo-5 Februwari 2001
Guardian , 18 Septemba 1999
IColombia: Iingcebiso zezobuLwaphulo
US Dept State, 13 Agasti 2008
Ukucula kwiZityalo, ngo-17 Disemba 2007
Ukuhlaselwa kwe-Burundanga Buxoki
VSAntivirus.com, 25 uEpreli 2006 (ngesiSpanish)
Ingqungquthela yaseMzaneni iba yinto eyenzekayo kuMfazi waseHouston
Iindaba ze-KIAH-TV, ngo-29 Matshi 2010
"I-Strawberry Ngokukhawuleza" iMeth Njengomlando Wemizi
IQumrhu Eliphantsi Kwebhedi
Ed Mezvinsky, uYise weGroom
Ubungakanani beKhomishana yaseFredited Federal: I-ADX Supermax
Iifayile ze-FBI zeNkohlakalo eziMxwayiso
'Intsha' Ukuphulwa kweNqola-ku-Indlela: I-Hole Ngaphansi kweNqanda
Indlela yokuba ngumceli ofanelekileyo kwiikholeji ze-intanethi
Ngobuvila nguChristopher Morley
Iinzuzo kunye noxanduva lwezobuzwe base-US
Inkcazo yesiNgesi kunye nemizekelo
I-Stonehill College i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Kufuneka Ufunde I-Daredevil: Uzalwe kwakhona
Ukuzivocavoca ukujolisa kwiindawo ezahlukileyo zeChofu
I-Biography yePro-Hockey Player Eddie Shore
I-Antique ne-Tin Toys Ixabiso lentengo / i-Guides Guides
Ukusebenzisana neNfihlelo yoBudlelwane